भारत भ्रमणमा आर्थिक विषय समेट्न सुझाव - BBC News नेपाली
भारत भ्रमणमा आर्थिक विषय समेट्न सुझाव
11 फेब्रुअरी 2016
Image caption नाका अवरोधले लामो समय देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला नेपालले उर्जा सहयोग, पर्यटन तथा व्यापार पारवहनका विषयलाई उठाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका अग्रणी व्यवसायीहरुले सल्लाह दिएका छन्।
हालैको नाकाबन्दीको स्थितिबाट पाठ सिक्दै लगानीको वातावरण सुधार्न भ्रमणको उपयोग हुनुपर्ने उनीहरुले जनाएका छन्।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ७ को सेरोफेरोमा गर्न लागेको भारत भ्रमणको मूल ध्येय राजनीतिक हो।
तर यसपटक झण्डै १३५ दिनसम्मको नाका अवरोधपश्चात नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति बेहोरेको सन्दर्भमा दिल्ली भ्रमणलाई आर्थिक पाटोबाट समेत सफल बनाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको भनाच छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रणी व्यवसायीहरुलाई बोलाएर सोध्दा उनीहरुले यस्तै सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले खासगरी यो भ्रमणले तीन मुख्य विषयलाई समेट्नुपर्ने बताइन्।
“उर्जा सहयोग, पर्यटन र व्यापार पारवहन सन्धीमा रहेका अप्ठेरा बारे कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदा उठेका विषयहरु जस्तो कि लुम्बिनी सर्किट, जनकपुर सर्किटलाई अघि बढाउनुपर्छ,” राणाले भनिन्।
संविधान बनेसंगै देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र लगानीको वातावरण सुध्रिने आशमा रहेको निजी क्षेत्र लामो बन्द हडताल र अकस्मातको नाकाबन्दीले नराम्ररी झस्किन पुग्यो।
तराई क्षेत्रमा करीब १२० दिन त पूरै उद्योग धन्दा ठप्प रहे भने त्यसपछि कैयौं दिनसम्म आंशिक सहज स्थिति भयो।
त्यसरी उद्योग धन्दा बन्द हुँदा अनि इन्धनको अभावमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुग्दा व्यापार एक तिहाईले घटेको, २२ सय भन्दा धेरै उद्योग धन्दा बन्द भएको अनि ४ लाख मानिसको रोजगारी प्रभावित भएको महासंघको अनुसन्धानले देखायो।
हाम्रो व्यवसायिक अधिकार के हो? हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशत भारतसंग हुने सन्दर्भमा हामी उद्योगी व्यवसायी कसरी सुरक्षित रहने? साथै भविष्यमा व्यापार र पारवहनलाई राजनीतिबाट अलग्याउन पर्यो
राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बन्द हडताल हुँदा दैनिक २ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी हुने गरेको अनुभवका आधारमा अहिलेको नोक्सानी ३ खर्ब रुपियाँ नाघेको अनुमान उसले गरेको छ।
यत्रो ठूलो क्षतिबाट पाठ सिक्दै आइन्दा व्यापार व्यवसायलाई राजनीतिबाट कसरी अलग्याउन सकिन्छ भन्ने बारे गम्भीर हुन आफुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए।
“हाम्रो व्यवसायिक अधिकार के हो? हाम्रो व्यापारको ७० प्रतिशत भारतसंग हुने सन्दर्भमा हामी उद्योगी व्यवसायी कसरी सुरक्षित रहने? साथै भविष्य व्यापार र पारवहनलाई राजनीतिबाट अलग्याउन पर्यो,” उनले भने।
यसपटकको नाकाबन्दीका समय नेपालले धेरै विषयमा विकल्प खोज्नुपर्ने पाठ सिक्नुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव छ।
एकै देशमा अनि एकै देशको पनि एकै नाका वा बन्दरगाहमा धेरै भर पर्दा समस्या झन जटिल बनेको उनीहरु बताउँछन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विगतमा एक चरणको सहमति भइसकेका विशाखापट्नमको बन्दरगाह, राधिकापुरको प्रयोग जस्ता विषयलाई अझ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।